I-AndEX 10: manje usungagijima i-Android 10 kwi-x86 PC yakho Kusuka kuLinux
I-AndEX iphrojekthi ethokozisayo. Idalwe ngu-Arne Exton, okuhlose ukudala uhlelo olusebenzayo kusetshenziswa i-Android njengesisekelo, kepha kuma-PC, okusho ukuthi, ukusebenzisa i-Android-x86 hhayi lokho okususelwa ku-ARM. Ngale ndlela, ungaba nale "distro" ongasebenzisa ngayo amandla aphelele we-Android njengokungathi kukhona okunye ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux. Ngaphandle kokusebenzisa ama-emulators, noma ukuhlanganiswa okuhlanganayo, njll. U-Arne ukunika konke okwenziwe ...
Ngemuva kwezinyanga eziyisishiyagalolunye zentuthuko ngemuva kokwethulwa kwe-AndEX Pie, manje seyethuliwe kanye EX 10, njengoba ungacabanga ukuthi kusekelwe I-Android 10. Le foloko ikwazile ukuthuthukisa ezinye zezinto kusuka kuphrojekthi yangempela ye-Android-x86 yale nguqulo yakamuva ye-10 evela kwaGoogle. Iyahambisana nenqwaba yamakhompyutha, njenge-Acer Aspire, HP, Samsung, Dell, Toshiba, Lenovo Thinkpad, Fujitsu, Panasonic, ne-ASUS.
Uma une-PC yedeskithophu noma omunye umkhiqizo ngaphandle kwaleyo noma eminye imishini efakiwe engahambelani nanoma yimuphi umkhiqizi, khona-ke kungenzeka ukuthi usebenzise i-AndEX 10 futhi. Inkinga kuphela ukuthi kwezinye izimo kungenzeka ingasebenzi kahle, noma ingahle iqale ezimweni ezimbi kakhulu. Uma kwenzeka lokhu kwenzeka, ungahlala ukuhlola kusuka ku- umshini obonakalayo ngeVirtualBox noma i-VMWare ...
Uma ufuna ukuthola i-AndEX 10, kufanele ukhokhe u- € 9, izindleko ezingaphakeme kakhulu ukufinyelela kusixhumanisi sokulanda. Kuyindlela yokuthola imali yephrojekthi, njengoba kwenza abanye. Uma ungafuni ukukhokha, ungasebenzisa amanye amaphrojekthi ahlukile, noma umshini obonakalayo ofakiwe we-Android 10 njengaleyo ongayithola ku-osboxes.org.
Ekugcineni, ngena Izindaba okuvelele kwe-AndEX 10, une:
I-Base Android 10 (x86).
Ukusekelwa kwehadiwe okuthuthukisiwe.
Izinhlelo zokusebenza ezintsha ezifakwe kuqala: Aptoide, Spotify, F-Droid, Angry Birds, YouTube, njll.
I-GAPPS ifakiwe ukuze ikwazi ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza namasevisi we-Google, isibonelo, ukufaka i-Google Play.
Ukusebenza nokwenza ngcono umsindo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-AndEX 10: manje usungasebenzisa i-Android 10 kwi-PC yakho ye-x86
noma uye kwenye i-Android OS X86 esekwe ku-PC!
uma kuqhathaniswa ne-prime OS ne-phoenix OS banethuba lokuthi isuselwa ku-Android 10 hhayi ku-7.1 njengalezi.
Njengoba kungafanele ngikhokhe, ngicabanga ukuthi ngizogcina lezi ezi-2 zokugcina (yize iPhoenix OS ikhombisa ukukhangisa), kepha kuyathakazelisa ukuthola ezinye izindlela, mhlawumbe kwesinye isikhathi ngizoyinika ithuba.
UNeee akhokhele okuthile mahhala
I-Google imemezele ukuphela kwezinhlelo zokusebenza ze-Chrome futhi kuzoba ukuphela ngokuphelele ngo-2022